Fandinihana voalohany amin'ny olombelona momba ny Kandida Vaksiny COVID-19 Vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fandinihana voalohany amin'ny olombelona momba ny Kandida Vaksiny COVID-19 Vaovao
Mandefitra tsara sy fiarovana tsara, tsy misy SAE na TEAE mitarika amin'ny fampiatoana aloha, tsy misy famantarana tsy ara-dalàna / valim-panadinana laboratoara misy dikany ara-pitsaboana
20μg ReCOV dia nahatonga ny titer avo lenta amin'ny anti-SARS-CoV-2 neutralizing antibody, miaraka amin'ny haavo farafahakeliny azo ampitahaina noho ny angon-drakitra navoaka miaraka amin'ny vaksiny mRNA, maminavina ny fahombiazan'ny ReCOV amin'ny fisorohana ny aretina vokatry ny SARS-COV-2.
Ny ReCOV dia hojerena bebe kokoa momba ny fahombiazany sy ny fiarovana amin'ny fitsapana klinika lehibe kokoa tsy ho ela
Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. ("Recbio"), orinasa biopharmaceutique mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary fivarotana vaksiny manavao izay afaka mamaha ny aretina manjaka miaraka amin'ny enta-mavesatra lehibe, androany dia nanambara vokatra mialoha tsara avy amin'ny First-in-human (FIH). ) fisedrana ny ReCOV, vaksinin'ny subunit COVID-19 taranaka vaovao sy recombinant. Amin'ny ankapobeny, ny angon-drakitra savaranonando dia naneho fa azo leferina tsara ny ReCOV ary nampiseho mombamomba ny fiarovana tsara. Ny 20μg ReCOV dia nahatonga ny titer avo lenta amin'ny anti-SARS-CoV-2 neutralizing antibody, miaraka amin'ny haavo azo ampitahaina farafaharatsiny noho ny angon-drakitra navoaka miaraka amin'ny vaksiny mRNA, maminavina ny mety ho fampanantenan'ny ReCOV amin'ny fisorohana ny aretina ateraky ny SARS-COV-2.
"Mamporisika antsika ny mombamomba ny fiarovana mialoha sy ny immunogenicity an'ny ReCOV amin'ity fitsapana FIH ity," hoy ny Dr. Liu Yong, Filoha sy Tale Jeneraly. "Ny vaksiny prophylactic dia mbola fomba mahomby indrindra hisorohana ny fihanaky ny SARS-CoV-2 sy hifehezana ny areti-mifindra manerantany. Tsy andrintsika ny hanome vaksiny COVID-19 amin'ny taranaka manaraka izay mety amin'ny fiarovana, ny fahombiazany ary ny fidirana, ary hampandroso ny ReCOV amin'ny fandalinana klinika lehibe kokoa tsy ho ela mba hanombanana ny fahombiazany sy ny fiarovana.
Ity fisedrana FIH mitohy ity dia fanadihadiana natao kisendrasendra, jamba roa, fehezin'ny plasebo mba hanombanana ny fiarovana, ny reactogenicity, ary ny immunogenicity amin'ny dosie miakatra 2 amin'ny ReCOV, rehefa atao amin'ny tsindrona intramuscular 2 (miaraka amin'ny 21 andro) amin'ny lohahevitra salama. Androany i Recbio dia nitatitra angon-drakitra ampahany tsy voahaja momba ny fiarovana, ny reactogenicity ary ny immunogenicity ho an'ny Cohort 1 (olon-dehibe tanora kokoa / ReCOV 20μg).
Ity vondrona ity dia nisoratra anarana mpandray anjara 25 izay 18 ka hatramin'ny 55 taona. Tao anatin'ny fitsarana, ny SARS-Cov-2-neutralizing antibody geometric mean titers (GMTs) dia navadika ho vondrona WHO/NIBSC an'ny IU/mL ho fampitahana ny titeran'ny antibody neutralizing amin'ireo vaksiny hafa be mpampiasa. Recbio dia nahazo GMT 1643.2 IU / mL ho an'ny antibiôtika tsy miandany amin'ny 14 andro aorian'ny fatra roa amin'ny ReCOV, miaraka amin'ny tahan'ny seropositive (SPR) sy ny tahan'ny seroconversion (SCR) ho 100%, izay manome soso-kevitra ny fahombiazan'ny ReCOV amin'ny fisorohana ny SARS-COV-2. aretina ateraky ny aretina. SARS-CoV-2 antibody neutralizing dia nataon'ny laboratoara foibe amin'ny fandalinana (360Biolabs). Araka ny fanadihadiana natao vao haingana1, ny GMT an'ny SARSCoV-2 neutralizing antibody dia 1404.16 IU/mL ary 928.75 IU/mL 14 andro taorian'ny fatrany roa ho an'ny vaksiny mRNA Moderna sy BioNTech/Pfizer mRNA.
Marihina fa mifototra amin'ny ranon-dra olombelona natambatra avy amin'ny marary mitsabo, ny fenitra iraisam-pirenena OMS (anisan'izany ny 20/136, nomen'ny National Institute for Biological Standards and Control [NIBSC]) dia nampiasaina betsaka mba hanodinana teknika diagnostika samihafa.
Nandritra izany fotoana izany, ny angon-drakitra immunogenicity sela dia naneho fa ny ReCOV dia mety hitarika ny valin'ny sela CD4 + T amin'ny antigène manokana amin'ny olon-dehibe tanora, taratry ny famokarana IFN-γ sy IL-2, ny fironana miharihary amin'ny phenotype Th1 dia voamarika miaraka amin'ny haavon'ny cytokines Th1 hita ao amin'ny. Andro 36 (14 andro aorian'ny vaksiny faha-2).
ReCOV amin'ny ankapobeny dia noleferina tsara miaraka amin'ny mombamomba ny fiarovana sy ny fandeferana tsara. Ny ankamaroan'ny trangan-javatra ratsy dia malemy amin'ny fahasarotana. Tsy misy SAE na TEAE mitarika ho amin'ny fampitsaharana aloha, tsy misy famantarana tsy ara-dalàna / valim-panadinana laboratoara misy dikany ara-pitsaboana.
Recbio dia namolavola sehatra teknolojia avo lenta telo ho an'ny fampandrosoana adjuvant vaovao, injeniera proteinina ary fanombanana immunological. Tohanana amin'ireo sehatra ireo, i Recbio dia manohy mahita sy mamolavola andiana kandidà vaksiny manavao, toy ny HPV, shingles ary vaksiny gripa.